September 8, 2020 - Factcrescendo Myanmar Document
အစိုးကပေးတဲ့ ကိုဗစိနိုင်တင်းထောက်ပံ့ကြေးတွေကို ဖြတ်စားတဲ့ ကျေးရွားအုပ်ကြီးကိုဖမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို Myanmar People Allianceဆိုတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်က ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က သတင်းတင်ခဲပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ နှစ်ထောင်ကျော်က ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီသတင်းမှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ကံဘဲ့လေးကျေးရွာအုပ်စုရှိ အိမ်ထောင်စု ၂၇၃ စုအတွက် တအိမ်ထောင်ကို ၂ သောင်းကျပ်စီနဲ့ နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ငွေ ၅၄ သိန်း ၆ သောင်းကျပ်ကို ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဝင်းက ပြည်သူကိုမပေးဘဲ ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးစွဲခဲ့တာကြောင့် မြောင်းမြမြို့နယ် ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှုးဦးမျိုးခိုင်က တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ FB Link Archive Link Web Link Archive Link အချက်အလတ်စိစစ်ချက် သတင်းပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြောင်းမြမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် […]
September 8, 2020 September 8, 2020 နေရာမောင်LeaveaComment on ပလက်ဝက စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကို ကျောက်တော်မီးလောင်မှုက ဒုက္ခသည်တွေ အဖြစ်ဖော်ပြနေ
စက်တင်ဘာလ ၃ရက်နေ့ ညပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ကျော်တော်မြိုနယ်က ကျေးရွာနှစ်ရွာမီးလောင်မှုကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအဖြစ်ဖော်ပြနေတဲ့ ပို့စ်တစ်ု လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပြန့်နှံ့နေတာ တွေ့ ရပါတယ်။ “တနိုင်ငံထဲမှာနေကြသူအချင်းချင်း ရက်စက်လိုက်ကြတာဗျာ လုပ်ရဲကြတယ်နှော် ဥပမာတခုပြောပြချင်တာက ရွာတရွာဟာမည်သည့်အကြောင်းကြောင်းဖြင့်မီးလောင်ပါစေ မြို့နယ်မီးသတ်ဘာလုပ်နေလည်း? မြို့နယ်အုပ်ချုပ် သူတွေကော ဘယ်ကိုခရီးလွန်နေလို့လည်း? လောင်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်အစီုးရအဖွဲ့ ကသွားမကြည့်သင့် ဘူးလား? ဒုက္ခရောက်သူများကို ကူညီစရာတို့အားပေးစကားတို့ သွားမပေးသင့်ဘူးလား? ဒီလောက်တရွာလုံးပြာ ကျသွားတာကို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတဦးဦးအနေနှင့် ဝမ်းနဲကြောင်းနှင့်အားပေးစကားလေး တခွန်တောင် မပြောသင့်ဘူးလား? တော်တော် တော်ကြတယ့်အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေဘဲ ပြောလိုက်ကြတာတော့ ဘာကြီး ညာကြီးတွေ ကြီးဘဲ ဒီAccထဲကလည်းမနက်ဖြန်အကန်းတွေကိုအကုန်ရှင်းထုတ်မည်”လို့ ရေးသားပြီး “Kyaw Hla Maung Rakhita”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ အောက်ပါအတိုင်းမျှဝေထားပါတယ်။ ပို့စ်မှာ ကျောက်တော်မြို့ နယ်မှာ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်က မီးလောင်ပုံ၊ ဒုက္ခသည်တစ်ချို့ပုံပါဝင်ပါတယ်။ […]